ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Arabhu (SaseLebanon) Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Efik Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iban Isi-Iceland Isi-Igbo Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Oromo Isi-Ukraine Isi-Urdu IsiBemba IsiBhunu IsiBislama IsiBulgaria IsiCatalan IsiCebuano IsiChewa IsiChiyao IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFiji IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKazakh IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLozi IsiLuganda IsiLuvale IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalta IsiMyanmar IsiNdebele (SaseZimbabwe) IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPangasinan IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiPutukezi (SasePortugal) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwahili (SaseCongo) IsiSwidi IsiTagalog IsiTatar IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTonga IsiTonga (SaseMalawi) IsiTsonga IsiTswana IsiTumbuka IsiTurkey IsiTwi IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
I-orange clown fish
ZIMBALWA izinhlanzi ezisikhanga njenge-clown fish. Mhlawumbe sichazwa yimibalabala yayo emihle, engase isikhumbuze usomahlaya wasesekisini. Noma mhlawumbe simangazwa yindawo ekhetha ukuhlala kuyo​—phakathi kwezimponjwana ezintinyelayo ze-anemone. Akumangalisi ukuthi elinye igama le-clown fish yi-anemonefish.
Njengabalingiswa abaningi baseHollywood, ama-clown fish awazixwayi izithombe. Abatshuzi nababhukudi ngokuvamile bangalindela ukuba ama-clown fish ame ukuze athathwe izithombe, ngoba awavamile ukuzulela kude nasekhaya futhi awanamahloni.
Kodwa okwenza ama-clown fish amangalise yindlela yawo yokuphila ebonakala iyingozi. Ukuhlala phakathi kwezimponjwana ezinoshevu kungase kubonakale kufana nokuhlala esidlekeni sezinyoka. Noma kunjalo, ama-clown fish awahlukani ne-anemone ayikhethile. Yini eyenza lobu budlelwane obuxakile benzeke futhi buphumelele?
‘ANGIKWAZI UKUPHILA NGAPHANDLE KWAKHO’
Itwo-banded clown fish
Njengezinto eziningi ezimbambisene kahle, ama-clown fish nama-anemone kuyazuza komunye nomunye. Lobu buhlobo abuyona nje into eyenza ukuphila kwe-clown fish kube lula; bubalulekile. Izazi zesayensi yezinto eziphilayo zasolwandle ziye zaqinisekisa ukuthi ama-clown fish awakwazi ukuziphilela wodwa olwandle ngaphandle kwe-anemone ahlala kuyo. Awakwazi ukubhukuda kahle futhi ngaphandle kwesivikelo se-anemone, angaba sengozini yokudliwa izilwane ezilambile. Nokho, ngokusebenzisa i-anemone njengekhaya nendawo yokuphephela lapho kunengozi, ama-clown fish angakwazi ukufika eminyakeni eyishumi ubudala.
I-anemone iyikhaya nendawo ephephile yokuzalela. Ama-clown fish azalela amaqanda awo phansi kuyi-anemone, lapho bobabili abazali bewaqaphisisa khona. Kamuva, ungase ubone umndeni wama-clown fish ujikeleza kuyo leyo anemone.
I-anemone yona itholani kulobu budlelwane? Ama-clown fish aba njengonogada basolwandle, axoshe ama-butterfly fish athanda ukudla izimponjwana ze-anemone. Okungenani uhlobo olulodwa lwe-anemone alukwazi ukuphila ngaphandle kokuba nama-clown fish ahlala kulo. Lapho abacwaningi besusa ama-clown fish, akuphelanga namahora angu-24 ayeseshabalele wonke ama-anemone. Ngokusobala, ayedliwe ama-butterfly fish.
Kubonakala sengathi ama-clown fish ayinikeza ngisho namandla i-anemone akuyo. I-ammonium ekhishwa ama-clown fish isiza ekukhuliseni i-anemone. Futhi njengoba ama-clown fish ethubeleza phakathi kwezimponjwana, asiza ekujikeleziseni amanzi agcwele umoya-mpilo kuyi-anemone.
UKUYA ENDAWENI ABANYE ABESABAYO UKUBHUKUDA KUYO
Ipink skunk clown fish
Isivikelo sama-clown fish sisesikhunjeni sawo. Sinojengezi olusamafinyila oluwenza angantinyelwa. Ngenxa yalolu lwelwesi olunekhemikhali, kubonakala sengathi i-anemone ibheka i-clown fish njengefana nayo. Njengoba kwasho omunye usosayensi wezinto eziphilayo zasolwandle, i-clown fish iba “inhlanzi egqoke izembatho ze-anemone.”
Olunye ucwaningo lusikisela ukuthi lapho ama-clown fish ekhetha i-anemone entsha azohlala kuyo, kudingeka azijwayelanise nayo. Kutholakale ukuthi lapho le nhlanzi ifika kuyi-anemone okokuqala ngqa, ilokhu iyithinta kuze kuphele amahora athile. Kubonakala sengathi ukulokhu iyithinta ngale ndlela kwenza i-clown fish ikwazi ukulungisa ulwelwesi oluyivikelayo luvumelane noshevu wale anemone entsha. Kungenzeka ukuthi i-clown fish iyantinyelwa kancane phakathi nalokhu. Kodwa ngemva kwalokho, kube sekuzwanwa.
Ukusebenzisana kwezidalwa ezihlukene kangaka kunikeza isifundo esithakazelisayo sokubambisana. Ezintweni eziningi, abantu abanamasiko nezizinda ezingafani bafeza izinto ezinkulu ngokusizana. Njenge-clown fish, nathi kungase kusithathe isikhashana ukujwayela ukusebenzisana nabanye, kodwa imiphumela iwufanele ngempela umzamo.
Thumelela Thumelela I-clown Fish Emangalisayo